TOP4သာမာန်အားကစားပြိုင်ပွဲ | Androidsis
ဒီနေ့ငါအပိုင်းနှင့်အတူပြန်ချင်တယ် အိမ်သာအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဂိမ်းများငါသူတို့အားတင်ပြရည်ရွယ်ထားတဲ့အပိုင်း ရိုးရှင်းပေမယ့်စွဲလမ်းဂိမ်းများ Android အတွက်, ငါတို့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂိမ်းအမြောက်အများကိုကစားရန်အတွက်အရင်းအမြစ်များသိပ်များလွန်းသည် (သို့) အချိန်မလိုပါ။
ဒါကြောင့်မင်းတို့အားလုံးကိုဒီအကြောင်းဝေမျှဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ထိပ်တန်းပေါ့ပေါ့လေးကစားနည်းများ ငါလေးစိတ်လှုပ်ရှားအကြံပြုပါသည် Android အတွက်ပေါ့ပေါ့စတိုင်ဂိမ်းများ။ အချို့သောဂိမ်းများသည်ကစားရန်လွယ်ကူသည့်အပြင်ရိုးရှင်းသောကစားရန်နှင့်မတူပါ။ Android အတွက်တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သော Google Play စတိုးတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။
ဒီမှာရှိတဲ့ဒီဂိမ်းအားလုံး ထိပ်တန်းပေါ့ပေါ့လေးကစားနည်းများ ငါအလွယ်တကူစိတ်ပျက်ရသူတွေကိုမသင့်တော်တဲ့စွဲလမ်းစေတဲ့ဂိမ်းတွေအကြောင်းမင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်။ ဖြည့်စွက်ကာ ၎င်းတို့အားလုံးအားအခမဲ့အခမဲ့ download ရယူနိုင်ပါမည် တရားဝင် Android application store မှ Google Play Store မှ
3 PINKY ကိုသိမ်းထားပါ
မိုးကောင်းကင် Play Store တွင်အခမဲ့ကစားနိုင်သောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချို့သောသက်ရောက်မှုများရှိသောမည်သည့်အချိန်တွင်မကစားရန်ဂိမ်း အလွန်ကောင်းမွန်သောဂရပ်ဖစ်များသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဂီတနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်လေထုဖြင့်လိုက်ပါသွားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အားလပ်ချိန်အနည်းငယ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ကစားနိုင်ခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များတွင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှိနေသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သည့်စတုရန်းအပိုင်းအစကိုအပိုင်းပိုင်းခွဲလိုက်သောအခါဂိမ်းတစ်ခုသည်အတော်လေးရှုပ်ထွေးပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးလာသည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်ဖျော်ဖြေမှုအရှိဆုံးနှင့်စိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်သည် ဂိမ်းထဲမှာတိုးဖို့ပျက်ကွက်ခြင်းမှတစ်ချိန်ကစိတ်ပျက်ရသူအဘို့အအကြံပြုလိုတယ်မဟုတ်ပါဘူး.
အရင်ဂိမ်းလိုပဲဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးမှာလည်းရိုးရိုးလေးအောက်မှာအခမဲ့ဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဂိမ်း ZIG ZAGမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ထိပုတ်ပါရုံဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်တကယ့်ရိုးရှင်းသောဂိမ်းသို့မဟုတ်ကစားနိုင်မှုအတွေ့အကြုံကိုပေးထားသည် လမ်းမှထွက်မသွားသင့်သောဘောလုံး၏ညှနျကွားကိုမောင်း.
အရာအတွက်ဂိမ်းတစ်ခု ကြီးမားသောအခက်အခဲမှာ ZIG ZAG ဇုန်များဖြစ်သည် နှင့်အလွန်အမင်းစွဲလမ်းဖြစ်ခြင်းအပြင်, ကအများဆုံးစိတ်ပျက်စရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ဤသည်ဖြစ်ကောင်းငါဒီမှာဒီမှာမျှဝေလေးယောက်အများဆုံးကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ် ထိပ်တန်းပေါ့ပေါ့လေးကစားနည်းများ။ Play Store တွင်အခမဲ့ရှာဖွေနိုင်သည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏ accelerometer နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်သိမ်မွေ့သောထိတွေ့ခြင်းဖြင့်ခုန်နိုင်ခြင်းနှင့်ပန်းရောင်ဘောလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့မောင်းနှင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ရှုပ်ထွေးသောလမ်းပေါ်ရှိကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသောအပေါက်များမှ ဖြတ်၍ မလိမ်ပါစေနှင့်။
ရေးသားသူ: ဂျွန် grden
ဒီပြီးအောင်ရန် TOP4သာမာန်ဂိမ်း နှင့်ဤအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာတင်ပြအခြားသူများထက်မနည်းစွဲလမ်းသို့မဟုတ် playable သည်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုတင်ပြချင်တယ် ARROWနယူကီအဟောင်း၏ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သောဤတွင်တင်ပြထားသောအခြားဂိမ်းများ၏ခေါင်းစဉ်နှင့်ပေါင်းစပ်ပါကသင်၏စွဲလမ်းမှုကိုထပ်ခါထပ်ခါမကစားနိုင်တော့သည့်စွဲလမ်းစေသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » ထိပ်တန်းပေါ့ပေါ့လေးကစားနည်းများ။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုကစားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဂိမ်းများ